သမိုင်း | နတ္ထိ
Archive for the ‘သမိုင်း’ Category
Punjabပြည်နယ် Chandigarhမြို့ Government Museum and Art Galleryထဲမှာ ခင်းကျင်းပြသထားတဲ့ Gandhara Sculpture တွေဟာ ဘီစီ၁ရာစုကနေ အေဒီ၃ရာစုအတွင်းက ထုဆစ်ခဲ့တဲ့ ရှေးဟောင်းကျောက်ဆစ်ရုပ်တုတွေလို့ ဆိုတယ်။ ၁၉၄၇ခုနှစ် India partitionမှာ Lahoreပြတိုက်ကနေ ဝေစုအဖြစ် ရယူခဲ့လို့သာ Chandigarhပြတိုက်ထဲမှာ ရောက်နေတာ။ Indiaမှာ Calcuttaပြတိုက်ပြီးရင် Chandigarhပြတိုက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ Gandhara Sculptureတွေဟာ ဒုတိယအများဆုံးလို့ဆိုတယ်။ ဒီဂန္ဓာရကျောက်ဆစ်ရုပ်တုတွေနဲ့ နီးနီးနားနား ရှိနေတာဟာ တကယ့်ကို ကံကောင်းတာပါပဲ။ Chandigarhမှာ နေခိုက် ၅နှစ်ကျော် ၆နှစ်အတွင်းမှာ မှတ်မှတ်ရရ ၃ကြိမ်တော့ ရောက်ခဲ့တယ်။ Panjabတက္ကသိုလ်နဲ့ ၃ကီလိုမီတာလောက်ပဲ ဝေးပေမယ့် အကြောင်းညီညွတ်မှပဲ သွားဖြစ်ခဲ့တယ်။
ခင်းကျင်းပြသထားတဲ့ ဂန္ဓာရလက်ရာကျောက်ဆစ်ရုပ်တု ၆၀၀ကျော်ထဲမှာ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေ ဗောဓိသတ္တရုပ်ပွားတော်တွေ ဒေဝတာရုပ်တုတွေ အရွယ်စုံ တွေ့ရတယ်။ ဗုဒ္ဓဖြစ်စဉ်တွေကို ဖော်ပြထားတဲ့ ကျောက်ထွင်းဗုဒ္ဓဝင်တွေကိုလဲ တွေ့ရတယ်။ ထူးထူးခြားခြား ဂန္ဓာရမှာ စတင်မွေးဖွားခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေကြားမှာ မွေးဖွားခြင်းနဲ့ မိခင်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ကျောက်ဆစ်လက်ရာ ၃ခုကို တွေ့ရတယ်။
“ဇာတိပိ ဒုက္ခာ”နဲ့ “ခီဏာ ဇာတိ”တို့ရဲ့ အကွာအဟကို ကိုယ်တိုင် သိမြင်ပြီး သူတပါးတို့ကို သိမြင်စေနိုင်မယ့် သားတစ်ဦးကို မွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့ မိခင်ရဲ့ ပုံရိပ်ဟာ လူသားအားလုံးအတွက် အနှိုင်းမဲ့တဲ့ စံအနေနဲ့ ထာဝရ တည်ရှိနေဦးမှာပါ…။
(၁) သိဒ္ဓတ္ထ မွေးဖွားခြင်း (အေဒီ ၃ရာစုလက်ရာ)
(၂) သိဒ္ဓတ္ထ မွေးဖွားခြင်း (အေဒီ ၂ရာစုလက်ရာ)
(၃) သိဒ္ဓတ္ထမွေးဖွားခြင်း (အေဒီ ၂ရာစုနှောင်းပိုင်းလက်ရာ)
Posted in စာတိုပေစ, ပုံရိပ်, သမိုင်း, အမှတ်တရ | LeaveaComment »
အသောကရဲ့ အက္ခရာများ (နောက်ဆက်တွဲ – ၈)
Meena Talimရဲ့ Edicts of King Aśoka: New Visionစာအုပ်ထဲက Dhauliနဲ့ Jaugadaကလိင်္ဂကျောက်စာ ပါဠိမူများပါ။ ကလိင်္ဂကျာက်စာရှိတဲ့နေရာကို သွားနိုင်ဖို့ ဘယ်လောက်များ အချိန်ယူရအုံးမလဲတော့ မသိဘူး။ အကွာအဝေးက သိပ်မများပေမယ့် အကွာအဟက များနေတာ ခက်တယ်။ အိပ်မက်ကတော့ မက်နေအုံးမှာပါ။ ကျောက်စာရှိတဲ့နေရာရောက်တော့လဲ ကျောက်တုံးကြီးတွေပေါ်က စာတွေကို ဖတ်ဖြစ်တာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အမြင်နဲ့ အတွေ့တွေက အနေအထားတစ်မျိုးပြောင်းသွားနိုင်တယ်။
စစ်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ သိနားလည်ဖို့ စစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်သလား။ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်လ်ဆုရှင်ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်သလား။ Commander in Chiefတစ်ယောက်လို တိုက်မိန့်ပေးတတ်ဖို့ လိုသလား။ Peacemakerတစ်ယောက်လို နားချတတ်ဖို့ လိုသလား။ အသေခံဗုံးခွဲဖို့ လိုသလား။ ဝတ်ပြုဆုတောင်းဖို့ လိုသလား။ သေနတ်ပြောင်းဝက ကျည်ဆံ တစ်တောင့်လို အားကောင်းဖို့ လိုသလား။ ချိုးငှက်နှတ်ခမ်းကြားက သံလွင်ခက်လို ပျော့ပြောင်းဖို့ လိုသလား။
ဘီစီ ၃ရာစုက ရေးထိုးထားခဲ့တဲ့ ကလိင်္ဂကျောက်စာဟာ စစ်ပြေငြိမ်းရေးစာချုပ်တစ်ခု မဟုတ်တာတော့ သေချာတယ်။ စစ်အောင်ပွဲခံ မော်ကွန်းတစ်ရပ်လဲ မဟုတ်နိုင်။ ထူးခြားတာ တစ်ခုက ကလိင်္ဂကျောက်စာတွေထဲမှာ ဝိဇယဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံး မပါတာပါပဲ။ ဓမ္မဝေါဟာရကလဲ ရှားရှားပါးပါး ၂လုံးပဲ ပါတယ်။ ကလိင်္ဂစစ်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းတွေ ရေးထိုးထားတဲ့ ပဓာနကျောက်စာကြီး အမှတ်စဉ် (၁၃)ကို ကလိင်္ဂဒေသမှာ မတွေ့ရတာကလဲ ထူးခြားတာပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စစ်ပွဲအပြီးမှာ ပေါ်ထွက်လာတဲ့ အသောကရဲ့ သက်ပြင်းရှိုက်သံတွေကို ကလိင်္ဂကျောက်စာကတဆင့် ခံစားကြားသိနိုင်တာကတော့ အမှန်ပါပဲ။
ကလိင်္ဂကျောက်စာကြီးတွေ ရှိရာအရပ်ကို ရောက်ရင်တော့ ဒီစစ်ပွဲကြီးပြီးရင် ဆိုတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို ဘာသာပြန်ဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားတယ်။ အခုတော့ စာအုပ်ထဲက ဒီကျောက်စာကို ဖိုင်ဘာကြိုးမျှင်တွေထဲ မျှောထည့်လိုက်တော့မယ်…။
Posted in စာကိုး, စာတိုပေစ, သမိုင်း, အသောကဓမ္မ, အသောကကျောက်စာ, အသောကခြေရာ | LeaveaComment »
Posted in ခရီးသွား, သမိုင်း | 1 Comment »
Posted in စာကိုး, သမိုင်း, အသောကကျောက်စာ |2Comments »
Posted in ခရီးသွား, သမိုင်း, အသောကကျောက်စာ, အသောကခြေရာ | 1 Comment »
His Grace” the King of Magadha addresses the Church with greetings and bids its members prosperity and good health. ‘You know, Reverend Sirs, how far extend my respect for and faith in the Buddha, the Sacred Law, and the Church. Whatsoever, Reverend Sirs, has been said by the Venerable Buddha, all of that has been well said. However, Reverend Sirs, if on my own account I may point out (a particular text), I venture to adduce this one: “Thus the Good Law will long endure.” Reverend Sirs, these passages of the Law, to wit:
5 The Dialogue on the Hermit’s Life (Money a- stile);
Sirs, I desire that many monks and nuns should frequently hear and meditate; and that likewise the laity, male and female, should do the same. For this reason, Reverend Sirs, I cause this to be written, so that people may know my intentions (abhipretam).’
4. Poem on “Who isahermit?” (Muni-gatha).
Posted in စာကိုး, သမိုင်း, အသောကကျောက်စာ | LeaveaComment »
နတ်တို့ချစ်မြတ်နိုးသော မင်းကြီး မိန့်တော်မူသည်မှာ–
Thus saith His Sacred Majesty (Devanaihpiya): ‘ Father and mother must be hearkened to; similarly, respect for living creatures must be firmly established; truth must be spoken. These are the virtues of the Law which must be practiced. Similarly, the teacher must be reverenced by the pupil, and fitting courtesy must be shown to relations.’ This is the ancient nature of things this leads to length of days, and according to this men must act.
ငါမင်းမြတ် ကြားသိတော်မူရသကဲ့သို့ (ဤလူ့ပြည်၌) ငယ်ရွယ်သူ ဖြစ်စေ, အိုမင်းသူဖြစ်စေ ဤနတ်ရွာ ရောက်ကြောင်းတရားကို အားထုတ်ကြစေ၊ ထို့အတိုင်းလည်း ငါ့စကားကို သိနားလည်ကြစေ၊ ဤနည်းကိုသာ ပြုလုပ်၍့, ရှည်မြင့်စွာ အားစိုက်ကြစေ၊ ယင်းသို့ အားထုတ်ခြင်းသည် ထိုအကျိုးကို တိုးစေလတ္တံ့၊ နှစ်ဆထပိုး တိုးတက်ပြန့်ပွားသော အကျိုးကိုလည်း တိုးတက် ပွားစီးစေလတ္တံ့၊ မချွတ်လျှင် ၂ဆ ထပိုး တိုးပွားလတ္တံ့၊ ဤသို့သော အကြောင်းအရာကို တောင်တို့အထက်၌ ရေးသား တည်ထားအပ်၏၊ (၀ါသတဟဓ) အရပ် ကျောက်တိုင်ထက်၌ ရေးသားစေအပ်၏၊ ဤသို့သော တရား သိမှတ်ကြောင်း စာတော်ဖြင့်လည်း (တွေ့မြင် သိနားလည်သမျှ သူတို့သည် ပြုကျင့် လိုက်နာစေသတည်း၊ ဤမိန့်မြွက်ချက် တရားစာတော်ကို ထုတ်ပြန်ပြီးလျှင်, ပြောကြားစေခြင်း, ပြောကြားရန် အားထုတ်စေသူ ထားရှိစေခြင်း– ဤနှစ်မျိုးကို ပြည့်စုံစွာ အမြဲး အခိုင် အားထုတ် နှိုးဆော်စေရန် မြဲးစွဲးစွာ ထားရှိစေ၏၊ ဤအဓိပ္ပါယ်ကို တောင်ထက်တို့၌ လည်းကောင်း ထိုအတူ ကျောက်တိုင်တို့၌လည်းကောင်း ရေးသားစိုက်ထားစေအပ်၏။……
နတ်တို့ချစ်မြတ်နိုးသော မင်းကြီး အမိန့် ထုတ်ပြန်တော်မူလိုက်သည်မှာ–
‘His Sacred Majesty (Devdnanpiya) gives these instructions: “For more than two-and-a-half years I wasalay disciple, without, however, exerting myself strenuously. Butayear in fact, more thanayear ago I entered the Order, and since then have exerted myself strenuously.
During that time the men in India who had been unassociated with the gods became associated with them. For this is the fruit of exertion. Nor is this to be attained by greatness only, because even by the small man who chooses to exert himself, immense heavenly bliss may be won. For that purpose has this proclamation been proclaimed: ‘ Let [small] and great exert themselves to this end.’
My neighbors, too, should learn this lesson, and may this lesson long endure! And this purpose will increase– yea, it will increase vastly, at least half as much again will it increase.” And this proclamation was proclaimed by the body of missioners (vyuthena), [to wit], 256 [persons].’
Posted in စာကိုး, သမိုင်း, အသောကကျောက်စာ | 1 Comment »